Wasiirka Gaashaandhiga Soomaaliya oo rajo xumo ka muujiyey dhismaha ciidan Qaran oo awood leh
Wasiirka difaaca Somalia Maxamed Xasan Xaamud ayaa sheegay inaan xiligan la dhisi Karin ciidamo qaran oo awood buuxda leh mar uu la hadlayey idaacada BBC-da.
Xaamud oo ka mid ah wafdiga madaxweynaha ee booqanaya dalka Maraykanka ayaa sheegay sababaha ugu waaweyn ee hortaagan dhismada ciidan qaran oo tayo leh ay ka mid tahay xayiraada hubka ee weli saaran Somalia.
“Lama awoodi karo xiligan in la dhiso ciidan tayo leh, waayo ciidamada waxay u baahan yihiin waxyaabo badan oo fududeynaya dhismahooda, waxyaabaha ugu waaweyn ee arintaas hor taagana waxaa ka mid ah xayiraada hubka ee Somalia saaran” ayuu yiri Xaamud.
Xaamud wuxuu sheegay in hadii la qaado cunno-qabateynta ay awood u leeyihiin inay dhisaan ciidammo tayo leh, isagoo xusay in siyaasada wasaaraddiisa ay tahay sidii loo dhiso lahaa ciidammo tababar iyo farsamo leh oo la wareega amaanka dalka sanadahaha soo socda.
“Horumarka dhulka wuxuu ku xiran yahay dib u dhiska ciidamada xoogga dalka, wasaaradda Gaashaandhiga waxay qorsheynaysaa inay dhisto ciidamo laga soo qoray gobollada dalka oo dhan, kuwaasoo leh awood ay soohdimaha dalka ku ilaaliyaan,” ayuu wasiirku hadalkiisa ku daray